CAD / GIS Nkuzi - Geofumadas
Usoro, usoro ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka maka ngwa CAD / GIS
Gịnị bụ isolines - ụdị na ngwa
Isiokwu a bụ maka ahịrị - isolines -, ụdị ha dị iche iche, ngwa dị iche iche ma ga - enyere ndị na - agụ ya aka inweta ihe ọmụma banyere ha.
Na Tọzdee, Nọvemba 29, dị ka Geofumadas tinyere ndị bịara 297 anyị sonyere webinar nke UNIGIS kwalitere n'okpuru isiokwu a: "Ọrụ nke geotechnologies na nhazi nke 3D Cadastre" nke Diego Erba, bụ onye kọwara mmekọrịta dị mkpa n'etiti geotechnologies na 3D cadastre E kpuchitere isiokwu ahụ ...
Ndagharị na vidiyo na Screencast-o-matic na Audacity.
Mgbe ịchọrọ igosipụta ngwa ọrụ ma ọ bụ usoro, ọtụtụ ndị ọkachamara na-aga nkuzi vidiyo na ibe ndị ọkachamara na isiokwu ahụ, ọ bụ ya mere ndị raara onwe ha nye n'ịmepụta ọdịnaya multimedia ga-eburu n'uche ihe ndị nwere ike imetụta akụrụngwa n'oge okike ha. , dị ka ọdịyo. Na nke a…
Akụziri CAD / GIS, mbụ echiche
Ezigbo ihe omume ịchekwa ihuenyo na idezi vidiyo
N'oge ọhụrụ 2.0 a, teknụzụ agbanweela nke ukwuu, nke mere na ha na-enye anyị ohere iru ebe ndị na-agaghị ekwe omume na mbụ. Ugbu a a na - eme ọtụtụ nde nkuzi na ọtụtụ isiokwu ma gbado anya n'ụdị ndị na - ege ntị ọ bụla, ka oge na-aga, ọ ghọọla ihe dị mkpa ịnweta ngwaọrụ na-echekwa omume anyị na - emepụta ...